အခမဲ့အဘို့အသင့်ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက် Make | အွန်လိုင်း Website Builder
အွန်လိုင်းသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Get & အခမဲ့မြှင့်တင်စတင်ရန်
Clever Ads Digital Transformation Pack ကိုအဆင့် ၂ ဆင့်ဖြင့်အွန်လိုင်းတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တစ်ရက်မပြည့်ခင်ရိုးရှင်းသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းဆွဲပါ အခမဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ဆောက်သူ ။
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အသစ်ကိုဂူဂဲလ်တွင်စတင်ပါ အသွားအလာ၊ အရောင်းနှင့်သစ္စာရှိဖောက်သည်များကိုဆွဲဆောင်သည် ။
အှနျလိုငျးထက်နည်း 24H GET
Clever Ads ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဆင်းသက်ရန်စာမျက်နှာကို Clever Ads website တည်ဆောက်သူနှင့်အလွယ်တကူဒီဇိုင်းဆွဲပါ
အသစ်ရဲ့ website ကလူတွေကိုဆွဲဆောင်နှင့် Google ပေါ်ကြော်ငြာအားဖြင့်အသစ်သောဖောက်သည်ရှာတွေ့
အခမဲ့ Google တွင် Advertise ပိုမိုသိရှိရန်
စတင်ချိန် မှစ. LIKE ကျွမ်းကျင်သူတစ် BUILD လှပသောဘ်ဆိုဒ် & ပုံပေါ်
ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသည်၎င်းကိုမှန်ကန်စေသည် : ECOMMERCE, BLOGGING, PORTFOLIOS မှသည်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ နည်းပြခြင်းနှင့်အရာအားလုံးအကြား
လိုအပ်သော coding မရှိပါ။
ဒါဟာသင့်ရဲ့ site ကိုတညျဆောကျဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူမဖြစ်နိုင်ဘူး။ လူတိုင်းအွန်လိုင်းသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွားနိုင်ဖြစ်သင့်သည်။
ပြောင်းလဲမှု, မြေတပြင်လုံးစာမျက်နှာသို့မဟုတ်က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကလစ်အတွက်အရောင်များနဲ့ layout fonts ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပုံစံမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်ရိုးရှင်းသောဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
အဲဒီမှာနေတဲ့ဒီဇိုင်နာဖြစ်ဖို့မလိုအပ်မယ့်, ဒါမှမဟုတ်ပင်ကောင်းတစ်အရသာရှိသည်။ ရုံဒီဇိုင်းကိုကောက်နှင့်သင့်အကြိုက်ကပြုပြင်မွမ်းမံ။
A / B စမ်းသပ်မှုရုံစုံတွဲတစ်တွဲကလစ်အတွက်ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်အဘယ်အရာကိုမြင်ရန်သင့်စာမျက်နှာများတွင်မဆိုဒြပ်စင်။
တက်-အရောင်းရဆုံးနှင့်အပြည့်အဝစိတ်ကြိုက်စေးဧရိယာများအတွက် optional ကိုထုရိုက်ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အတူတခြေလှမ်းငွေသိမ်းကောင်တာတွေထည့်ပါ။
ထုတ်ကုန်မဆိုအမျိုးအစားရောင်းအရောင်, အရွယ်အစား, ကိုယ်ပိုင်စျေးနှုန်း, SKU, စတော့ရှယ်ယာကဲ့သို့သူတို့ကိုငါကွဲပြားခြားနားသောအပွောငျးအလဲ add ...
တစ်နေရာတည်း, automated အီးမေးလ်များနှင့်ပိုပြီးအနေဖြင့်အားလုံးအမိန့်ကိုစီမံခန့်ခွဲ။ သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရေကြောင်းနှင့်အခွန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေသတ်မှတ်ထားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အသစ်ရဲ့ site မှာ Google မြှင့်တင်ရန် & အွန်လိုင်းပေါ်မှာသင့်လုပ်ငန်းတိုးတက်
သင့် site မှာ Google အခမဲ့ကြော်ငြာ START
သင်၏ကဲ့သို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုရှာဖွေသောအခါသင်၏ဖောက်သည်များ၏ရှေ့မှောက်၌ရယူပါ။ Clever Ads တွင်ဒေါ်လာ ၁၅၀ အထိ Google Ads ဖြင့်အခမဲ့စတင်ပါ။
တစ်ဦးကလက်ချောင်းကိုမ WE စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး CREATE
Google Ads ဖန်တီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဲလွန်စမရှိဘူးလား။ Clever Ads ကသင်၏ရှာဖွေခြင်းနှင့်ပြသခြင်းအစီအစဉ်များကိုအခမဲ့ဖန်တီးလိမ့်မည်။ လွယ်ကူပါတယ်။ ပုံနှိပ်ကောင်းမရှိပါ
THE မီးမောင်းထိုးပြသခြင်းရှိ BE နှင့်သင့် COMPETITION ရှုံးနိမ့်
ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်အသိအမြင်တိုးပွားစေနှင့်ပိုပြီးဖောက်သည်များကိုဆွဲဆောင်ကူညီပေးနေ Google ကဖြတ်ပြီးသင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်, ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပြပေးလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကိုရောက်ရှိပိုမိုလွယ်ကူခဲ့ဘယ်တော့မှသိရသည်။
လိမ္မာပါး CLEVER ရလဒ်များအတွက်တစ်ခုတည်းသောငွေပေးချေခြင်း
သင်၏ Google Ads ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပါမည် Google Ads စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွေလုပ်တဲ့အတွက်၊ သင်လိုအပ်တာအတွက်တစ်ပြားပိုပေးစရာမလိုတော့ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ယုံကြည်ကိုးစားပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အောင်မြင်မှုကိုအာမခံပါသည်။
အခမဲ့ google ပေါ် Advertise
ဤခက်ခဲသောအချိန်များအတွင်းကျွန်ုပ်၏အားကစားရုံစတူဒီယိုကိုပိတ်ခဲ့ရသည်။ Clever Ads သည်ကယ်ဆယ်ရေးသို့ရောက်လာသည်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များကိုအွန်လိုင်းတွင်ဆက်လက်လေ့ကျင့်နိုင်ပြီး ၀ င်ငွေကောင်းကောင်းရရှိသည်။
ငါသည်ငါ၏အသစ်က်ဘ်ဆိုက်ဖန်တီးခြင်းနှင့်တစ်ဝက်နေ့ရက်ကာလ၌, ကကြော်ငြာ, နှစ်ဦးစလုံးကအားလုံးကိုဖွင့်ထား၏။ ဤသူသည်ငါဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းမခေါ်အဘယျသို့ဖွစျသညျ! ငါပြီးသားသေးတစ်ဒေါ်လာစျေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမရှိဘဲအချို့အသစ်များကိုအွန်လိုင်း clients များရရှိခဲ့သည်။
ရိုးသားစွာကျွန်မရဲ့အင်္ဂလိပ်သင်ကြားရေးအတန်းများအတွက် website တစ်ခုဖန်တီးရန်နှင့်ပင်လျော့နည်းအကြောင်းကိုဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမသဲလွန်စခဲ့ Google Ads ။ သို့သော် Clever Ads ကလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်ခဲ့သော်လည်း Clever Ads ဘာမှလုပ်စရာမလိုခဲ့ပါ။
NOW က ONLINE သင့်လုပ်ငန်း GET